Microsoft Excel chinhu chakasimba kwazvo chakawanda-chinangwa chishandiso chinogona kushandiswa naani nani. Asi kana iwe uri mumwe munhu anoshanda nemashiripiti mazuva ese, ungangoda kuziva zvakawanda kupfuura izvo chete mabhesiki ekushandisa Excel. Kuziva mashoma mashoma mazano anogona kuenda nenzira refu neExcel. Muenzaniso wakanaka kuziva nzira yekubatanidza masero muExcel pakati pemashiti uye mabhuku ebhuku.
Kudzidza izvi kuchachengetedza nguva yakawanda uye kuvhiringidzika mukufamba kwenguva.
Nei Batanidza Cell Data muExcel
Kuve nekugona kududzira data pane dzakasiyana masheji hwakakosha hunyanzvi pane zvikonzero zvishoma.
Kutanga, zvichaita kuti zvive nyore kuronga mapepa ako ekuparadzira. Semuenzaniso, iwe unogona kushandisa pepa rimwe kana bhuku rekushanda rekuunganidza data rakasviba, wobva wagadzira tebhu nyowani kana bhuku idzva rebasa remishumo uye / kana pfupiso.
Paunongobatanidza masero pakati pezviviri izvi, iwe unongofanirwa kushandura kana kuisa data nyowani mune imwe yazvo uye mhedzisiro yacho inozochinja mune imwe. Zvese pasina famba uchidzoka uye pakati pakati akasiyana maspredishiti.
Chechipiri, uyu musungo unodzivirira kudzokorora nhamba dzakafanana mumapepa akawandisa. Izvi zvinoderedza yako nguva yekushanda uye mukana wekuita calculation zvikanganiso.
Mune chinyorwa chinotevera, iwe uchadzidza nzira yekubatanidza maseru mamwe mune mamwe mapepa ekushandira, kubatanidza masero akasiyana, uye maitiro ekubatanidza masero kubva kune akasiyana maExcel zvinyorwa.
Maitiro Ekubatanidza maCustom maviri
Ngatitange nekubatanidza masero maviri ari mumakisi akasiyana (kana ma tabo) asi mune iyoyi Excel faira. Kuti uite izvozvo, tevera nhanho idzi.
In Sheet2 Type a chiratidzo chakaenzana (=) kupinda muchitokisi.
Enda kune imwe tab (Sheet1) uye tinya sero raunoda kubatanidza naro.
dzvanya pinda kupedzisa formula.
Iye zvino, kana iwe ukanyevera muchitokisi mukati Sheet2, iwe uchaona kuti Excel inonyora iyo nzira yako mune formula bar.
Semuyenzaniso, = Sheet1! C3, apo Sheet1 izita remapepa, C3 isero rauri kubatanidza naro, uye chiratidzo chechiratidzo (!) inoshandiswa semuparadzanisi pakati pezviviri.
Uchishandisa iyi nzira, unogona kubatanidza manna usingasiyane nebepa rekutanga zvachose. Ingo nyora fomu yekureva yakananga muchitokisi.
Ongorora: Kana zita remapepa riine nzvimbo (semuenzaniso Shepa 1), saka iwe unofanirwa kuisa zita racho mumamaki emashoko mumwe kana uchinyorera chirevo muchitokisi. Like = 'Shepiti 1 ′! C3. Ndokusaka dzimwe nguva zviri nyore uye zvakanyanya kuvimbika kurega Excel ichinyorere rechiti formula kwauri.
Maitiro Ekubatanidza Range reMasero
Imwe nzira yaunogona kubatanidza masero muExcel ndeyekubatanidza huwandu hwesero kubva kumasera akasiyana eExcel. Izvi zvinoshanda kana iwe uchida kuchengetedza iyo data yakafanana mumashiti akasiyana pasina kurongedza mairi maviri.
Kuti ubatanidze inopfuura sero rimwe chete muExcel, tevera nhanho idzi.
Mune iyo yekutanga tab ne data (Sheet1), simbisa masero aunoda kureva.
Kopa maseroCtrl/murayiro + C, kana kurudyi tinya uye sarudza mufananidzo).
Enda kune imwe tab (Sheet2) uye tinya pasero (kana masero) kwaunoda kuisa zvinongedzo.
Kurudyi tinya pasero (-s) uye sarudza Pasika Special…
Pakona yekuruboshwe kona yemenyu sarudza Pasika Chibatanidza.
Paunodzvanya masero achangobatanidzwa muSheet2 iwe unogona kuona iyo mareferensi kumasero kubva kuSheet1 mune iyo formula tab. Zvino, pese paunoshandura data mumasero akasarudzwa muSheet1, inozongochinja data racho mumasokisi akabatanidzwa muSheet2.
Maitiro Ekubatanidza Sero Nebasa
Kubatanidza kune rimwe kusangana kwemaseru kunogona kubatsira kana iwe ukaita zvikamu uye uchida kuzvichengeta pane pepa rakaparadzana kubva kune yekutanga data data.
Ngatitii iwe unofanirwa kunyora SUM basa muSheet2 iyo inobatanidza nenhamba yemasero kubva kuSheet1. Kuti uite izvozvo, enda kune Sheet2 uye tinya pasero kwaunoda kuisa basa. Nyora mashandiro acho seyakajairwa, asi kana zvasvika pakusarudza mhando dzemasero, enda kune rimwe pepa worongedza sezvakatsanangurwa pamusoro.
Iwe uchave uine = SUM (Sheet1! C3: C7), apo iyo SUM inoshanda inopeta zvirimo kubva mumasero C3: C7 muSheet1. Press pinda kupedzisa formula.
Maitiro Ekubatanidza Masero Kubva Kwakasiyana mafaira eExcel
Maitiro ekubatanidza pakati peakasiyana maExcel mafaira (kana mabhuku ebhuku) akafanana akafanana pamusoro. Kunze kwekunge, iwe paunomata masero, anoise mune imwe kaspidhi yekuita panzvimbo peimwe tafura rakasiyana. Heano maitiro ekuzviita mumatanho ari nyore.
Vhura zvese zvinyorwa zveExcel.
Mufaira repiri (Yerubatsiro Desk Geek), sarudza sero wonyora a chiratidzo chakaenzana (=).
Chinja kune iyo yekutanga faira (Online Tech Tips), uye tinya pasero raunoda kubatanidza naro.
Ikozvino formula yesero yakabatana inewo rimwe rebhuku rezita mubhuku mumakaki mabraki.
Kana iwe ukavhara iyo yekutanga Excel faira uye wotarisa formula zvakare, iwe uchaona kuti ikozvino zvakare ine iyo yese gwaro nzvimbo. Zvinoreva kuti kana ukafambisa iyo yekutanga faira iyo iwe yakabatanidza kune imwe nzvimbo kana kuitazve zita, zvinongedzo zvinomira kushanda. Ndokusaka zvakanyanya kuvimbika kuchengetedza data rese rakakosha mune imwe chete Excel faira.
Iva Pro Microsoft Excel Mushandisi
Kubatanidza masero pakati pemashiti inongova imwe chete muenzaniso wezvaungaita dhizaira data muExcel uye chengetedza mashamba ako akarongeka. Tarisa uone zvimwe Excel matipi uye manomano zvatinoisa pamwechete kuti tikubatsire iwe kuve mushandisi wepamberi.
Ndezvipi zvimwe zvakapfeka zvakanaka zveExcel lifehacks zvaunoziva uye kushandisa? Iwe unoziva dzimwe nzira dzekusika dzekubatanidza masero muExcel? Goveranaiwo nesu muchikamu chekutsanangura pazasi.
Maitiro eKutumira kunze kana Kupinza data kubva kuExcel kuenda kuGoogle Sheets